wararkii ugu danbeeyey ee Hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim jong Un – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA wararkii ugu danbeeyey ee Hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim jong Un
Saraakiisha Kuuriyada Koofureed ayaa ku baaqaya in laga digtoonaado iyadoo la sheegayo in hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un uu xanuunsan yahay, iyagoo carabka ku adkeeyay inaysan jirin dhaqdhaqaaq aan caadi aheyn oo ka dhaca xadka waqooyiga.
Kulan looga hadlayey oo albaabadu u xidhaayeen axadda, ee wasiirada Kuuriyada Woqooyi oo uu hogaamineyey Kim Yeon-chul, oo kormeeraya la shaqeynta Waqooyiga, ayaa sheegay in dowladdu ay leedahay awooda sirdoonka si ay u sheegto iyagoo kalsooni ku qaba inaysan jirin wax aan caadi aheyn oo dhacaya.
Wararka xanta ah iyo wararka la isla dhexmarayo ee ku saabsan caafimaadka hogaamiyaha Kuuriyada Woqooyi ayaa bilaabmay ka dib markii uusan ka soo muuqan fasax qaran oo muhiim ah bishii Abriil 15. Illaa markaas laguma arag meel fagaare ah.
Saxaafadda South Korea ayaa usbuucii hore soo warisay in Kim laga yaabo inuu maray qaliin wadnaha ah ama uu kali ku ahaa si looga fogaado inuu la kulmo cudurka ‘coronavirus’.
Si kastaba ha noqotee, waxay wadeen warbixino sheegaya inuu u diray farriin mahadnaq ah shaqaalaha dhisaya meel dabka laga dhaliyo oo dalxiis oo ku yaal Wonsan, oo ah goob ay qaar ka mid ah warbaahinta South Korea ay sheegeen in Kim uu sii joogi karo.
Moon Chung-in, oo ah la-taliyaha sare ee arrimaha dibedda ee Madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Moon Jae-in, ayaa sidaa ku sheegay faallooyinka ay ku baahiyeen wargeysyada Mareykanka.
“Kim Jong Un wuu nool yahay oo wuu wanaagsan yahay. Wuxuu sii joogay aagga Wonsan illaa iyo Abriil 13. Ma jiraan dhaqdhaqaaqyo laga shakisan yahay oo ilaa iyo hadda la ogaadey.”
Tareenka uu leeyahay oo lagu arkay gobal wonsan/
Sawirada satalaytka ee usbuucii la soo dhaafay ayaa muujinayay tareen khaas ah oo laga yaabo inuu Kim ku leeyahay Wonsan, oo miisaan culus ku bixinaya warbixinadaas, sida laga soo xigtay 38 Waqooyiga, oo ah mashruuc korjoogteynta Kuuriyada Waqooyi ee fadhigiisu yahay Washington.
In kasta oo kooxdu ay sheegtay in ay u badan tahay tareenka gaarka ah ee hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi, wakaaladda wararka ee Reuters ma aysan awoodin in ay si madax banaan u xaqiijiso taas ama in uu ku sugan yahay Wonsan.
Af hayeen u hadlay wasaarada mideynta ayaa sheegay isniintii inaysan haysan wax ay xaqiijiso markii wax laga weydiiyay warbixinada ku saabsan in Kim uu ku sugan yahay Wonsan.
Toddobaadkii hore Shiinaha ayaa koox u diray Woqooyiga Kuuriya oo ay ku jiraan khubaro caafimaad si ay ugala taliyaan Kim Jong Un, marka loo eego saddex qof oo yaqaana xaaladda.
Reuters ayaa awoodi weyday inay si dhakhso ah u go’aamiso waxa safarka ee koox Shiineeys ah ay ku xardhan yihiin caafimaadka Kim.
Khubaradu waxay ka digayeen in Kim uu ka tirtiray baahinta warbaahinta dawladda ka hor iyo in ururinta macluumaadka saxda ah ee Kuuriyada Waqooyi ay aad u adag tahay.
Warbaahinta gobolka Waqooyiga Kuuriya ayaa markii ugu dambeysay warbixin ka diyaarisay Kim halka uu joogo markii uu shir gudoominaayay Abril 11.
Kim, oo la rumeysan yahay inuu yahay 36 jir, ayaa laga waayey warbaahinta gobolka in ka badan hal bil 2014kii TV-ga Woqooyiga Kuuriyana markii dambe wuxuu muujiyey inuu lugtiisa ku lugeynayo.